Global Voices teny Malagasy » Noho Ny Fanekena Ny Pelaka Tao Hong Kong, Naka Lokon’ny Avana Ny Valopin’ny Taombaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Noho Ny Fanekena Ny Pelaka Tao Hong Kong, Naka Lokon'ny Avana Ny Valopin'ny Taombaovao
Voadika ny 25 Febroary 2015 18:41 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Mediam-bahoaka, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Ilay valopy mena zarain'ny Action Q dia nomena endrika osy voaloko toy ny avana – satria taonan'ny Osy ny 2015 – mba ho entina milaza ny fanirian'ny vondrom-piarahamonin'ireo LGBT ny hanekena azy ireo. Sary avy amin'ny Facebook-n'ny Action Q.
Mazàna dia fotoana iray iarahan'ny fianakaviana manao fandaniana ny Taombaovao Sinoa miankina amin'ny fihodin'ny volana. Mandritra ireo andro vitsivitsy any ampiandohany, manolotra ilay valopy mena efa fomban-drazany hatrizay ireo olona manambady ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny fianakaviana ka mbola tokantena, ho toy ny fihetsika maneho faniriana zava-tsoa. Saingy tsy mbola eken'ny rehetra any anaty fiarahamonina Shinoa ireo mpivady mitovy fananahana, isan'izany ny ao Hong Kong, noho izany dia lasa fotoana miteraka tahotra ho an'ireo pelaka lahy sy vavy ilay fotoana tokony ho firavoravoana sy fifampiarahabàna.
Hiatrehana ilay olana, ny vondrona Action Q mpikatroka mafàna fo mpiaro ny LGBT dia nanomboka fanentanana iray antsoina hoe “Miara-mankalaza ny Taombaovao amin'ireo Olona Pelaka”. Ny alina nialoha ny Taombaovao, tao afovoan-tanànan'i Hong Kong, nizara valopy mena namboarina manokana ho amin'izany ilay vondrona, nifono tantaram-piainana telo tena marina, milaza ny fahatsapàn'ireo pelaka mandritry ilay fankalazàna. Misy osy miloko toy ny avana natao printy eo amin'ny fonon'ireo valopy mba hanehoana ny fanirian'ny vondrom-piarahamonin'ireo pelaka hankafy ny fankalazàna ny Taombaovao toy ny ankalazàn'ireo mpivady tsy mitovy fananahana azy io.
Nohazavain'ilay  vondrona ny antom-pisian'ilay fanentanana ao amin'ny Facebook, tamin'ny famaritany ny hoe manao ahoana ny fahatsapan'ireo LGBT ilay vanim-potoana fankalazàna:
Ny Taombaovao no fetibe tena manan-danja indrindra ho an'ny Shinoa. Fandaniana fotoana sy fitsidihana fianakaviana no tena ampahany betsaka amin'io vanim-potoana io. Hatramin'ny fahagola, dia teo anivon'ireo tokantrano sy fianakavian'olona tsy mitovy fananahana mifanambady no nifantoka ny fanatanterahana ireny hetsika ireny. […] Eny anivon'ny fianakaviana dia tsy azon'ireo pelaka atao ny manolotra valopy mena ho an'ireo zandriolona, sady tsy manana rahateo fomba manokana itondràna ireo mpivady pelaka izahay ao anatin'ny fianakaviambe. Ohatra, tsy hainay hoe ahoana no hitondrànay ny vadin'ny anabavinay. Anjorom-bala ireo pelaka mifanambady ao anatin'ny rafitry ny fianakaviana amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny sata azo lazaina ho somary ambany ihany. […] Ho an'ireo zandrikely ao anatin'ny fianakaviana, anontaniana foana ry zareo mikasika ny fiainam-pitiavany rehefa mitsidika fianakaviana. Tsy maintsy miatrika tsindry maro ny ankamaroan'ireo lahy samy lahy na vavy samy vavy mifanambady satria tsy te-hanahiran-tsaina ny ray aman-drenin-dry zareo eo anatrehan'ireo havana, na tsy niteny tamin'ny ray aman-dreny mikasika ny fironana ara-pananahany velively ny sasany amin'izy ireny.
Ny roa amin'ireo tantara tao anaty valopy dia mitantara ireo fanontaniana manahirana voarain'ireo pelaka lahy sy vavy avy amin'ny fianakaviany sy ny namany. Ny iray tena nandòna fo dia mitantara reny iray nanasa ny vadin-janany lahy  hiray latabatra amin'ny fianakaviana mandritry ny sakafo hariva rehefa faran'ny taona:
母親輕敲半掩的房門，端來一杯暖和的蜜糖水，說「仔，年三十晚食團年飯，唔好約人呀」。[…] 團年飯都是訂於年三十晚，年年如是[…] 而以往母親亦沒有如此刻意提醒。[…] 我回過頭去面對母親。我們四目相投了一秒，這一秒卻異常漫長，我完全不知道母親究竟要說甚麼，只感受到她將要說的是一件重要的事，終於母親打破了沉默，說「如果你朋友得閒，你就叫埋佢上嚟食飯啦」。
Nandondòna tao am-baravarako i Neny ary nanolotra ahy rano mafàna mamin-tantely. Avy eo dia hoy izy, “Ry zanakolahy, hisakafo farany amin'ny taona isika, aza mandeha mivoaka miaraka amin'ny hafa”. […] Isan-taona no manao izay fiarahana misakafo hariva izay izahay […] ary tsy nampahatsiahy ahy toy zao mihitsy ny reniko tany aloha tany. […] Nahodiko hiatrika azy ny lohako ary nanakimpy ny masonay iray segondra izahay, segondra iray tena lavabe. Tsy dia haiko loatra teo izay resaka tian'ny reniko hatao, saingy tsapako tato anatiko fa ho resaka manan-danja be. Farany dia noravàn'ny reniko ilay fahanginana ka hoy izy, “Raha manana fotoana ilay namanao, dia ento misakafo aty an-trano izy.”
Vantany vao nahare ny teniny aho ary afaka nandinika izay nolazainy, nanomboka nitsinjaka toy ny diera ny foko ary ny tànako nipararetra teo amin'y feko. Niezaka mafy ny hanaisotra ny fientanentanako sy ny hafaliako aho ary namaly azy tamin'ny feo tony, “OK, hanontany azy aho rehefa avy eo.” Sarotra be ho ahy sy ny reniko ny fifanakalozan-dresaka tahaka izany. Herinandro feno ranomaso sy fifandonana ilay nivoahako tao amin'ny ray aman-dreniko. Avy eo, telo taona no nisorohanay ny resaka rehetra momba ny fifankatiavan'olon-droa mitovy taovam-pananahana. Ambony be ny fifanenjanana ka ny fanehoana eny amin'ny tarehinay izay mety ho endrika fihetsehampo ao aminay dia mety hiafara amin'ny ranomaso. […]
Taorian'ny nialàn'ny reniko ny efitrano, niezaka mafy nitàna ny ranomasoko aho rehefa niantso ilay lehilahy olon-tiako, “Sam, afaka mankaty aminay ve ise amin'ny sakafom-pianakaviana ny hariva ny faran'ny taona?”
Amin'izao fotoana izao, samy tsy misy ekena ao Hong Kong na ny fifanambadian'ny mitovy taovam-pananahana na ny fifamatorana sivily. Na dia mbola mihoatra 3% amin'ireo mpanohana aza eto ny isan'ireo manohitra ny fifanambadian'ireo mitovy taovam-pananahana, ny fironana hita dia manondro  fa toy ny efa mivonona ny hanaiky ny fisian'izy ireny ny fiarahamonina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/02/25/67900/
 nanasa ny vadin-janany lahy: https://www.facebook.com/ActionQHK/photos/a.424769300956772.1073741828.423940851039617/612527335514300/?type=1&theater
 ny fironana hita dia manondro: http://mypaper.pchome.com.tw/miss33lin/post/1326687658